Air Conflicts: Secret Wars ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Game » Air Conflicts: Secret Wars
By နေမင်းမောင်4:00 AM10 comments
ကျွန်တော်အရင်ကလည်း တင်ပေးမယ်တင်ပေးမယ်နဲ့ မတင်ဖြစ်သေးတာပါ။ စက်တွေနဲ့ ကိုက်အောင်လည်း ရှာရသေးတော့ အခုမှပဲတင်ပေးဖြစ်သွားတာပါ။ လေယာဉ်ပစ်3D ဂိမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ OS မှာဆိုရင် Windows XP/ Windows Vista/ Windows7နဲ့ Processor အနည်းဆုံး Intel Core2Duo E7300 2.66GHz / AMD Athlon II X2 255 ၊ Memory Ram မှာဆိုရင်3GB ၊Hard Disk Free Space:9GB ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Video အနေနဲ့က nVidia GeForce GTS 150 / ATI Radeon HD 5670 512MB ဒီလောက်ပဲထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းကို Run တဲ့အချိန်နဲ့ Run ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ တက်နိုင်တဲ့ Error လေးတွေကိုပါ ကျွန်တော်အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ပြပေးထားပါတယ်။ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဗျာ. Graphic နိုင်ရင်တော့ အရမ်းကစားလို့ကောင်းပါတယ်.
ပထမဆုံး ကျွန်တော်တို့ Autorun လေးကနေသွားပါမယ်။ Auto Run ဖိုင်လေးကို အရင်ဖွင့်လိုက်ပါ.. ပထမဆုံး ကျွန်တော်တို့ Install အရင်ဆုံးပေးပါမယ်။
နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ DirectX ကို Install လုပ်ပါမယ်။
နှစ်ခုစလုံး Run ပြီးသွားတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ Fairlight ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးထဲမှာရှိတဲ့ ACSW ဆိုတဲ့ Crack ဖိုင်လေးကို ကျွန်တော်တို့ C:\_Program Files\_bitComposer Games\_Air Conflicts Secret Wars ဆိုတဲ့ Install လုပ်ထားတဲ့ ဖိုလ်ဒါလေးထဲကို ကူးထည့်ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ Play လို့ရပါပြီ။ ဒီမှာ တစ်ချက်ရှိပါတယ်။ အောက်မှာပြထားတဲ့ ပုံလေးမှာရှိတဲ့ Error လေးတက်ကောင်းတက်နိုင်ပါတယ်။ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။
ဒီ Error လေးတက်ပြီဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ကျွန်တော်ထပ်ပြပေးထားပါတယ်. ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ Configure ဆိုတဲ့ Application လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ အောက်မှာပြပေးထားတဲ့ အတိုင်း Resolution လေးကို ပြောင်းပေးလိုက်ပါ။ အဲ့ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေပါပြီ။
အပိုင်းအားလုံးပေါင်း ၉ ပိုင်းရှိပါတယ်။ အပိုင်း ၁ ကနေစပြီးခွဲထုတ်လိုက်ရင် ISO ဖိုင်လေးနဲ့ ရလာပါတယ်။ ဖိုင်လေးကိုဖြည်ပြီး Install လုပ်ပေးရင်အဆင်ပြေပါပြီ။ ကျွန်တော် နက်အခြေအနေကြောင့် ကျွန်တော့်ဆီမှာတော့ မတင်ပေးနိုင်တဲ့ အတွက် မူရင်းလင့်ခ်လေးကနေပဲ ပြန်ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အပိုင်း ၁ ကိုစခွဲတဲ့အချိန်မှာ Password လိုပါတယ်။ Password က http://www.topfreepcgame.com ဖြစ်ပါတယ်။ Mediafire လင့်ခ်လေးကနေတင်ပေးထား ပါတယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
မူရင်းလင့်ကတော့ http://www.topfreepcgame.com ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Password လဲ ဒီအတိုင်းပါပဲ။
micom fighte November 16, 2011 at 10:42 AM
temp November 17, 2011 at 1:12 AM
https://www.protect-software.com/eshop/UnlockApp.aspx? ဒီဆိုဒ်ကunlock code တောင်းတယ်၊ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။
temp November 17, 2011 at 1:20 AM
Sorry!!!! ကျွှန်တော့စက်ကမပြည့်စုံတာပါ။ တောင်းပန်ပါတယ်။ ပီားးးးးးး
Anonymous November 19, 2011 at 1:28 AM
Anonymous November 19, 2011 at 1:30 AM
နေလင်း November 20, 2011 at 7:35 PM
ကိုနေမင်း.ဒေါင်းပြီးလို့ installလုပ်တဲ့အဆင့်မှာ installကို နိပ်တာ ဘာမှဆက်မသွားဘူး.ဘာနိပ်နိပ်အလုပ်မလုပ်ဘူးဖြစ်နေတယ်..iso file ကရပြီ. install လုပ်မရတာ ကူညီပါအုံးဗျာ
key တောင်းနေတယ် keygen လေးတင်ပေးပါလား ကိုနေမင်း
kyawhtet March 28, 2012 at 1:00 AM
ဘလော့လုပ်နည်းလေးတွေ တင်ပေးပါအုံး.. ကိုနေမင်းရေ.. ဘလော့လေးတစ်ခုလုပ်ချင်လို့ပါ။
တစ်ခုလောက်တောင်းဆိုချင်လို့ပါ.... general last version လေး တင်ပေးလို့ရမလားမသိဘူးခင်ဗျာ....
loiklaw@email.com May 26, 2012 at 1:44 PM